Cishe zonke endlini ungathola izikhala ebusika: ukhukhamba, salads, imifino, utamatisi juice, nokuningi. Phela, singamakhosikazi emizi kakhulu anakekele ukuthi ngenkathi ezibandayo etafuleni babe izithelo nemifino equkethe amavithamini, nakuba hhayi ubuningi ezifana fresh. Ukuze senze workpiece ebusika asikho isidingo emiphongolweni yabo, ngoba, isibonelo, kahle usongwa ukhukhamba notamatisi isikhathi eside futhi ligcinwe ngaso ekamelweni lokushisa. Futhi ezinye izithelo nemifino kungenziwa zivaliwe futhi emva kokwelashwa, naphezu kweqiniso lokuthi iqhwa emgwaqweni, ukujabulela ukunambitheka kanye nephunga elimnandi sitrobheli, okusajingijolo nokunye. D.
Ukuze wenze esitokisini ebusika ngezindlela eziningana. Phakathi kwabo, pickling futhi ngosawoti, pickling, omiswe, ukuwafaka ushukela, yebo, umnkantsha nje. Kulo mBhalo, imifino noma izithelo elondoloza izakhamzimba eziningi. Nokho, lapho ngosawoti noma pickling bengathola ukudla ngomumo ukuthi kungenziwa ngokushesha abeke etafuleni njengenhlangano appetizer.
Ngokwesibonelo, kungaba njengoba preform ebusika isaladi ikhukhamba. Ukuze ulungiselele lokhu amanzi okugqumisa, kuzothatha 3 kg yamakhukhamba fresh, okuyinto uthathe ezincane (3-5 mm) izindandatho. Fake usike kweqembu parsley, nesweli (100 amagremu) ophoqelelwe ngokusebenzisa cindezela. Izithako kuthiwa kuhlobene, ibekwe lapha efanayo usawoti 3 wezipuni ushukela kanye namabhodlela. Ingxube kwaphumela enyakaza futhi washiya amahora ambalwa (mhlawumbe ubusuku). Ngemva kwalokho, ikhukhamba sigudluke ukulungele izimbiza kuhlanzekile futhi inzalo imizuzu embalwa, bese corked kapron noma insimbi ofeleba.
Njengoba Amalungiselelo isaladi ikhukhamba ebusika, walungisa ngokusho iresiphi kuyoba isidlo esihlwabusayo wabe esethi kujabulise, lapho ukunambitheka izithelo fresh balondolozwa. Amabhange phambi crimping Kunconywa ukwengeza inani elincane amafutha yemifino. Abanye besifazane uthanda ukubeka lapha aletha onion.
Winter wokuvuna notamatisi ngezindlela ezihlukahlukene: ungenza nabo juice yabo, ngesimo ukusikeka, njengoba utamatisi noma isoso, ukulungiselela ijusi. Nge iyiphi indlela yokusingatha lokhu kungaba ngempela isidlo ethandwa kubanda, lapho imifino emashalofini kuthiwa luya luba yivelakancane.
Ngokwe-iresiphi elandelayo kungenziwa kuphekwe katamatisi nge bell pepper. Amabili amakhilogremu utamatisi badabula grinder inyama futhi agqoke umlilo amaminithi angu-10. Ngokulandelayo, lapha yengezwe pod pepper hot, amagremu 100 amafutha sunflower, isipuni sikasawoti kanye 3-4 wezipuni. nezinkezo ushukela.
Ingxube wasala ukufudumeza imizuzu 10. Ngaphezu kwalokho, ngo-Imi utamatisi zibe emapheshana ibekwe 5-6 izingcezu pepper, izaqathe ogayiwe. Dish iqeda imizuzu engu-15 futhi bevalela e amabhodlela inzalo futhi ixhunyiwe.
Winter preform kungenziwa simisiwe. Ngakho besifazane abaningi bakhetha ukubhekana imifino, izaqathe, nsimbi pepper, okuyinto ungakwazi ke umane ususe efrijini, enezele isobho noma borsch. Imikhiqizo pre-wageza, bahlanza futhi olwembiza.
Inkukhu ezazigxishwe nokunye okufana nokolweni kanye amakhowe
Quartz Green: imilingo izakhiwo, izimpawu kanye nokubuyekeza